Ndi Cardigan Welsh Corgi bu ezigbo enyi gi? - Dịrị
Ndi Cardigan Welsh Corgi bu ezigbo enyi gi?
Cardigan Welsh Corgis, nke a makwaara dị ka Cardigans , EGO , ma ọ bụ Cardis , bụ otu n'ime ụdị nkịta abụọ dị ọcha Corgi.
Ndị a mara mma, spunky obere nkịta na-ukwuu hụrụ n'anya n'ụwa nile na pụrụ ịbụ nke zuru okè na mgbakwunye na nke ezinụlọ gị.
Nọgide na-agụ iji chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Cardigan Welsh Corgis, gụnyere ogologo oge ha ga-adị ndụ, ụdị mmega ahụ ha chọrọ, yana mkpa ejiji ha.
Ebee ka Cardigan Welsh Corgi si malite?
Kedu ihe Cardigan Welsh Corgi dị?
Ndi Cardigan Welsh Corgis di nma na umuaka?
Etu ị ga-esi lekọta ụmụ nkịta Cardigan Welsh Corgi gị
Cardigan Welsh Corgi okwu ahụike
Ego ole bụ nwa nkita Cardigan Welsh Corgi?
Kedu ihe dị iche na Pembroke na Cardigan Welsh Corgi?
Onye kwesịrị inweta nkịta Cardigan Welsh Corgi?
Ọgụgụ ọzọ: Cardigan Welsh Corgi na-agwakọta
Aha ya mgbe alaeze ochie nke Cardiganshire dị na Wales, Cardigan Welsh Corgis nwere akụkọ ihe mere eme nke gafere afọ 3,000.
Nke a mere ka ha bụrụ otu n’ime ụdị nkịta nkịta kacha ochie na otu n’ime ụdị nkịta kacha ochie na agwaetiti Britain.
Aha ha Corgi pụtara nkịta nkịta, a kwenyere na nkịta ndị a mara mma bụ ụmụ nke ezinụlọ Teckel nke nkịta, nke mụrụkwa Basset Hound na Dachshund udiri anumanu.
N'ịbụ ndị sitere na Central Europe site na ebo ndị Celtic, Cardigan Welsh Corgis ghọrọ dị ka ndị nlekọta na nkịta ehi , ndị na-ekpochapụ ụmụ ahụhụ, na ndị enyi ha hụrụ n'anya.
Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na ndị Celt webatara Wales na mbido gburugburu 1,200 BC, nkịta ndị a na-arụ ọrụ dị oke ọnụ maka ikike ha nwere ilekọta na ìgwè ehi.
Ọ bụ ya mere iwu ndị Welsh ji chebe ha ozugbo, na-enye ntaramahụhụ maka onye ọ bụla nwara izu ohi ma ọ bụ merụọ Cardigan ahụ.
Otu akụkọ na-enye nkịta a mma, na-ese ha dị ka ndị enyi canine nke ndị na-agba ịnyịnya Corgis na-aga agha n'abalị.
Humansmụ mmadụ nwere obi ụtọ nweta nkịta ndị a site na akụkọ ifo ha.
Ọ bụ ezie na egosiri Cardigan Welsh Corgis na ihe nkịta Bekee sitere na 1919, akụkọ ihe mere eme nke oge a jikọtara ya na nkịta aha ya bụ Bob Llwyd onye biri na 1920s.
Nkịta na-acha ọbara ọbara ma na-acha ọcha, Bob Llwyd kpaliri ụdị ọkọlọtọ, na Bekee Cardigan Welsh Corgi Association hiwere na 1926.
Bob Llwyd bụ nna Ch. Agba ọla edo bụ onye mechara bụrụ nkịta onye mbụ Corgi na 1931.
N'otu afọ ahụ, otu nwanyị aha ya bụ Oriakụ B.P. bubakwara ụzọ abụọ Cardigan Welsh Corgis na United States. Oke.
Oriakụ B.P. Ndị nkịta Bole gụnyere Cardigan nwanyi na-azụlite Cassie, bụ onye gosipụtara akara ọcha na brindle pụrụ iche.
Otu n'ime nkịta Cassie's Cardigan Welsh Corgi ghọrọ onye mmeri agbụrụ mbụ na United States.
A na - akpọ aha nkịta ahụ kwa afọ nke a na-akpọ Cardigan Welsh Corgi Club of America, Inc.
Ọ bụ ezie na a ghọtara taa dị ka otu American Kennel Club dị iche iche na ìgwè ndị na-azụ anụ na dịka ìgwè dị iche iche nke United Kennel Club, ọ bụghị na 1934 ka amata ụdị abụọ Corgi dị iche iche.
Ruo afọ ahụ, e depụtara Cardigan Welsh Corgis na Pembroke Welsh Corgis dịka otu ụdị ma na-esonye mgbe niile.
Na 1935 na Cardigan Welsh Corgi Club nke America tọrọ ntọala ma taa, ndi otu ahu kwesiri ileba anya n’onye isi AKC ụdị ọkọlọtọ .
Amara dị ka nkịta-ogologo-ogologo yad, ejiri mara Cardigan Welsh Corgis nke ha ogologo, dị ala slung body , ụkwụ dị mkpụmkpụ, na nke ha ọdụ ogologo, nke yiri aka uwe nke uwe elu Cardigan.
Nkịta ndị a dị iche na nke Pembroke Welsh Corgi dịgasị iche na ha dị obere ma buru ibu karịa nke nwere ihu pụtara ihu na isi na ntị dị okirikiri.
Size: Kedu otu Cardigan Welsh Corgi si buru ibu?
Cardigan Welsh Corgis dika dị n'agbata kilogram 25 na 38 (kilogram 11 na 17) na ụmụ nwanyị na-abata na njedebe nke ọnụ ọgụgụ dị n'agbata kilogram 25 na 34 (kilogram 11 na 15).
Cardmụ nwoke Cardigans dị n'agbata kilogram 30 na 38 (kilogram 14 na 17). Nkịta ndị a guzo ihe dị ka sentimita 10 ruo 12 (sentimita 25 ruo 30) n’ubu ha.
N'ihi ntakịrị na ogo ha, Cardigan Welsh Corgis ga-enwekwa ọ happyụ n'otu ụlọ ime obodo dịka ha nọ n'ugbo obodo, ma ọ bụrụhaala na a na-enye ha mmega ahụ ha chọrọ kwa ụbọchị.
Uwe ụdị a ka Cardigan Corgis nwere?
Cardigan Corgis nwere akwa akwa mmiri na-eguzogide mmiri na-ajụ ogologo . Ha nwere akwa mkpuchi dị mkpụmkpụ nke ogologo oge dị elu, nke dị n'elu nke ezubere iji guzogide oge oyi Welsh.
Ogologo ajị anụ nke Cardigan ga-adịtụ iche. Dogsfọdụ nkịta nwere uwe dị nro, nke na-acha ọcha, ma ọ bụ ezie na ọ dị mma, ha abụghị ihe na-achọsi ike ka ntutu ha na-eme obere ihe iji chebe obere nkịta a megide ọnọdụ ihu igwe dị oke egwu.
Fọdụ CWCs nwere akụkọ ifo na azụ ha . Nke a bụ nkedo ebe ntutu dị iche na ogologo na ntuziaka, yana akara aka na-ezo aka na akụkọ Welsh ebe ndị fairies na-agba nkịta ndị a n'ọgbọ.
Imirikiti Cardigan Welsh Corgis ga-enwe akara ọcha n’isi ha na afọ ha, ihe e kere eke, n’akpa ya, n’olu, na ụkwụ. Fọdụ nwere ike ịnwe ọkụ na-acha ọcha n'isi ha, ebe isi tan na brindle dịkwa ọtụtụ.
Ma Cardigan Welsh Corgis batara ọtụtụ agba . Ndị ahụ gụnyere ndo niile nke ọbara ọbara, sable, tan, brindle na ojii. Blue merle bụ ndo pụrụ iche maka ụdị a.
Lelee Cardigan Welsh Corgi na-acha uhie uhie na-egwu egwuregwu na-acha anụnụ anụnụ na vidiyo a mara mma:
Mmetụta na mmetụta ịhụnanya, na Cardigan Welsh Corgi bụ otu enyi na enyi, nwee ezi uche nke ahụ nwere ike ịbụ zuru okè enyi gị na ezinụlọ gị .
Dogsmụ nkịta ndị a siri ike iji soro ụmụaka na-egwuri egwu, na dị ka ndị nwere oke agbụrụ, ndị Cardigans na-eme nke ọma na mmekọrịta mmadụ na ibe ha, na-enwe mmekọrịta pụrụ iche maka ọgbọ ndị na-eto eto.
Otú ọ dị, iji dọọ aka ná ntị, dị ka ìgwè anụ ụlọ, nkịta ndị a na-achọkarị ịpụ n'ikiri ụkwụ ụmụaka mgbe ha na-egwuri egwu n'ihi mmuo ike ọzụzụ ọzụzụ ndị ahụ.
Mgbe Cardigans na-eme nke ọma na anụ ụlọ ndị ọzọ , ha nwere ike ịkpachara anya na ọbụna na-eme ihe ike na nkịta dị iche. Inweta nkịta ọzọ ha nwere ike igwu egwu; karịsịa Corgi, ga-enyere aka na nke a.
Nkịta ndị a nwekwara ike ịgwụ ngwa ngwa mgbe a hapụrụ naanị ha ruo ogologo oge ma nwee nchekasị nkewa.
Site na ihe niile dị n'elu, Cardigan Welsh Corgi ga-adị mkpa ka a zụọ ya na mmekọrịta mmadụ na ibe gị n'oge gbochie iji gbochie agwa adịghị mma, dịka ịpinye aka, ịmalite itolite, ọkacha mma tupu ị ruo ọnwa anọ.
Ihe dị mma bụ na dị ka otu ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi , Cardigan Welsh Corgis bụ mfe trainable .
N'ihi ọzụzụ a na eziokwu na ha dị njikere ịrụ ọrụ, ị na-ahụkarị ndị Cardigans bi n'ugbo ịnyịnya ebe ha nwere ike inyere ndị nwe ịnyịnya aka na ndị na-adọkpụ ụgbọala.
Nke ahụ kwuru, ha nwere ike ịnọrọ onwe ha ma sie ike ma nwee ike ijikọ na ihe ị chọrọ. Housetraining, karịsịa, nwere ike isi ike na ụdị a, na ọzụzụ crate nwere ike ịdị mkpa maka Cardi gị.
Ndi Cardigans bukwara ezigbo olu, nkịta na-achị . Ọdịdị ha mụrụ anya ga-eme ka ha maa jijiji n'ihe ọ bụla nke na-ada ụda, na-ada ụda, ma ọ bụ na-esi isi.
Ma ka nke a na-eme maka elele anya dị oke mma, na-enweghị ọzụzụ zuru oke, ịnwere ike ịnwe nkịta na-akụ ihe ọ bụla na ihe niile.
Cardigan Welsh Corgis bụ nke nwere obi ojoo, nke siri ike nke nwere ike imeghari nke ọma na ọtụtụ gburugburu.
Otutu n'ime ilebara Cardigan gi anya bu ihe ezi uche di na ya, na iji nlezianya ubochi, mmega, na ejiji gi, Cardigan Welsh Corgi gi gha ebi ndu ogologo, obi uto na adi nma.
Otu ihe ị ga-eburu n'uche bụ na n'agbanyeghị ịnwe akwa mkpuchi ihu igwe abụọ, Cardigan Welsh Corgis nwere ike ịnagide ọtụtụ ọnọdụ ihu igwe.
Agbanyeghị, edobere nkịta ndị a maka ndụ n'èzí n'ihi mkpa ọ dị ịnọrọ ndị mmadụ.
Na-emega Cardigan gị Welsh Corgi
N'agbanyeghị obere ha, Cardigan Welsh Corgis nwere ike dị elu ma choro mmega ahu kwesiri ubochi.
Enwere ike igbochi mmega ahụ Cardigan Welsh Corgi na a ogologo ije kwa ụbọchị dị ihe dị ka nkeji iri anọ na ise ruo otu awa ya na ufodu igba egwusi egwu.
Nke ahụ kwuru, Cardi gị ga-abụ kasị nwee obi ụtọ mgbe ị na-enye ọrụ . Nkịta ndị a hụrụ ezigbo ọzụzụ atụrụ ma ọ bụ ịsọ mpi n'egwuregwu nkịta dị ka agility.
Naanị jide n'aka na ị gaghị emebiga ya ókè na mbụ ma ọ bụ nwalee usoro mmega ahụ na-adabaghị na nkịta nwere ụkwụ dị mkpụmkpụ, dị ka bouldering ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè, ebe ụdị a agaghị enwe ike ịdebe.
Ndi corgis Cardigan Welsh wụsịrị?
Akwa akwa uwe abụọ nke Cardigan Welsh Corgi na-awụfu kpamkpam .
Agbanyeghị na ụdị a ga-aga n’ihu n’ime afọ niile, ị nwere ike ịtụ anya oge ịwụfu arọ abụọ dị egwu na oge a gbanwere mgbe Corgis na-afụ uwe ha.
N'ihi ya, jikere maka hichaa ụdị nkịta a mgbe mgbe .
Asọcha kwa izu dị mkpa ọtụtụ afọ, ebe oge ịwụfu nwere ike ịchọ ka a na-agbatị usoro a ka ị na-ehicha kwa ụbọchị. Igwe ịsa ahụ na-ekpo ọkụ ga-enye aka wepu akwa uwe si na Corgi gị.
Tinyere idozi uwe Cardigan gị, jidekwa ete ezé nkịta gị ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n’izu iji gbochie mkpokọta tartar na nje bacteria, na-enyere aka igbochi ọrịa ezé na ọnụ ísì ọjọọ.
Ọzọkwa, lelee ntị Cardigan Welsh Corgi kwa izu maka ihe ịrịba ama ọ bụla nke ọrịa, dị ka acha ọbara ọbara ma ọ bụ isi ísì ọjọọ.
Enwere ike iji nhicha mmiri hichaa ntị, na-eme ka ehichapụ ntị dị n'èzí ma ghara itinye ihe ọ bụla n'ime oghere ntị.
Ntu kwesiri idozi ya otu ugbo ma obu ugboro abuo n’onwa oburu na ha adighi ada ala dika igbochi anya mmiri.
Dika Cardigan Welsh Corgis choro ego di nkpa, obu ezi echiche ka nkita gi na aru ha aka mgbe ha ka di nkita.
Mgbe ị na-azụ nwa nkịta Cardigan Welsh Corgi gị, gbaa mbọ mepee ọnụ ha ma jide aka ha, ya mere, nke a maara ha ahụ.
Ma jiri otuto na ntu kwụọ ha ụgwọ, si otu a mee ka ahụmịhe ahụ bụrụ nke dị mma.
Ego ole ka m kwesịrị ịzụ Cardigan Welsh Corgi?
Cardigan Welsh Corgis nwere mmekọrita ove n'ihi oke ịhụnanya ha nwere maka nri.
N'ihi ya, jide n'aka na-arapara na-atụ aro kwa ụbọchị nkwere maka a ìgwè nke a size, nke bụ n'etiti otu iko na otu ọkara nke nkụ nkịta .
Nri nkịta a kwesịrị ịdị oke mma ma nwee ike kewaa n'etiti oge nri abụọ.
Jide n'aka na ị gaghị ahapụ nri na nchekwa ma nye nkịta gị ọtụtụ ọgwụgwọ ma ọ bụ nri mmadụ, n'ihi na nke a nwere ike ime ka Cardigan Welsh Corgi gị buru oke ibu.
Ọ bụrụ n’iche na nkịta gị na-ebu abụba, ị ga - ahụ ma ọ bụrụ na ọgịrịga ya ga - adị gị mma. Should ga-enwe ike ịnụ ọgịrịga gị ntakịrị mana n’etinyeghị aka nke ukwuu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, nkịta gị chọrọ mmega ahụ na obere nri.
Cardigan Welsh Corgis bụ nkịta ndị nwere ahụike afọ ndụ n'etiti 12 na 16 afọ . N'ime oge nkịta gị, ha nwere ike ibute ụfọdụ nsogbu ahụike kachasị na-emetụta ụdị a.
Nke a gụnyere nsogbu agagharị na-emetụta ọkpụkpụ azụ.
N'ihi ogologo ha dị ogologo na obere ala dị ogologo Cardigan Welsh Corgis bụ enwere ike ịkpụkpụ azụ, ọ ga-adị gị mkpa ilekwasị anya na ụdị a mgbe ha na-arịgo ma na-agbada steepụ ma ọ bụ nwaa ịrịgo na arịa ụlọ.
Nakwa, jide n'aka na ị gaghị eburu Cardi gị na-enweghị nkwado abụọ na ụkwụ ụkwụ.
Fọdụ ọrịa ndị nwere ike ịgụnye agagharị na Cardigan Welsh Corgis gụnyere menelopathy degenerative na hip na ikpere dysplasia.
Ọzọkwa, Corgis dị yikarịrị ka nkịta ndị ọzọ nwere nsogbu anya .
Nke a na-agụnye atrophy retinal na-aga n’ihu (pra), ọrịa a ketara eketa nke na-eme ka retina na-akawanye njọ na n’ikpeazụ na-akpata ikpu ìsì abalị ma ọ bụ ikpu ìsì kpam kpam.
A na-atụ anya ọtụtụ ọrịa anya ndị ọzọ ketara eketa na Cardigan Welsh Corgis.
Ndị a gụnyere ọrịa anya anya, nke kachasị emetụta nkịta ndị toro eto, Glaucoma nke nwere ike ibute ìsì ọsịsọ.
Distichiasis, ọnọdụ na-egbu mgbu nke ntutu site n'ime nkuchianaya na-akpata, ihe ndozi mbụ nke lens, nke na-eme mgbe eriri ndị na-ejide anya anya na akpụkpọ ahụ na-aga n'ihu.
Ọrịa ezé na-adịkarị n'ọtụtụ nkịta, na-emetụta 80% nke nkịta niile n'okpuru abụọ, na Cardigan Welsh Corgis na-enwekarị nsogbu.
Ọrịa eze na-agwọghị ọrịa nwere ike ibute ọnọdụ dị njọ karị dị ka mmebi obi, akụrụ, nkwonkwo, ma ọ bụ imeju.
Ọzọkwa, Cardigan Welsh Corgis maara na ọ ga-eketa ntị chiri ebe akụrụ ma ọ bụ eriri eriri na-adịkarị na ụdị a karịa ndị ọzọ.
Mgbe ị na-azụta Cardigan Welsh Corgi nwa nkịta dị ọcha, nkịta gị kwesịrị ịbịa site na mkpuchi ahụike maka dysplasia hip Ntọala Orthopedic maka anụmanụ
Na ule DNA maka atrophy retinal na-aga n'ihu site na Canine Eye Registry Foundation.
Iganmụ nkịta Cardigan Welsh Corgi na-efu n'etiti $ 1,200 na $ 1,800 , ya na nkịta nkịta na-efu ihe dị ka $ 1,500.
Na mgbakwunye na ịzụrụ naanị nwa nkịta Corgi, ịkwesịrị ịtụle ụgwọ ndị ọzọ dị ka ịzụta ihe ndina, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ụzọ na olu akwa, na nri kwa ọnwa na ịkwụ ụgwọ maka ịgba ọgwụ mgbochi, nleta anụ ụlọ, na mkpuchi ahụike anụ ụlọ.
Chọta onye na-azụ azụ Cardigan Welsh Corgi
Mgbe ị na-achọ ịzụta Cardigan Welsh Corgi, kpachara anya enwetala nkịta gị site na ụlọ nkịta nkịta ma ọ bụ ụlọ ahịa anụmanụ.
Chọọ maka ndị na-azụ anụ nwere aha ọma mara etu esi elekọta ụdị anụ a ma dị njikere ịhapụ gị ka ị hụ gburugburu nkịta nne na nna zụlitere.
E kwesịkwara izere ndị na-azụ azụ ụlọ n'ihi nsogbu nke Corgis na-amụ nwa.
N'ihi ụdị isi a buru ibu na obere pelvis, a na-achọkarị ndị na-elekọta ya, onye na-azụ azụ a ma ama ga-aghọtakwa nkịta nne na nna ha chọrọ.
Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ azụ Cardigan Welsh Corgi iji bido nyocha gị:
Ezinaụlọ Cardigan Welsh Corgis , Tucson, Texas
Fọdụ ndị ga - azụta Cardigan Welsh Corgi n’enweghị ezigbo ihe ọmụma banyere ihe na - achọ otu n’ime ụmụ nkịta a, ma ọ bụ ihe nwute, n’ihi ọnọdụ dị iche iche, ezinaụlọ Cardis enweghịzị ike idobe ha.
N'oge ndị a, ị nwere ike nwee ihu ọma ịchọ Cardigan chọrọ ụlọ ọhụrụ.
Ndị a bụ ụfọdụ ndị ọrụ nnapụta Corgi ị nwere ike ile anya mgbe ị na-achọ ịchọta Cardigan Welsh Corgi maka nnabata:
Cardigan Welsh Corgi National Rescue Tụkwasị Obi , Na mba nile
East Coast Corgi Nnapụta , Washington DC
Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Corgi , NC, SC, na GA
Maa mma Pembroke Welsh Corgi
Ọ bụ ezie na amatara ya na mbụ ka otu ụdị, amarala ya ugbu a na Cardigan Welsh Corgis na Pembroke Welsh Corgis nwere akụkọ dị iche iche na njirimara dị iche iche.
A kwenyere na Pembroke Welsh Corgis sitere na ụdị nkịta Spitz wee weta Wales ma Vikings ma ọ bụ Flemish.
Pembroke Welsh Corgis dị obere karịa ma fechaa na ibu karịa Cardigans nwere ụkwụ dị mkpirikpi ebe isi isi ha dịkwa iche iche, ịbụ ndị nwere akụkụ atọ nwere ntị.
Agbanyeghị, ọdịiche dị n'etiti nkịta abụọ ahụ dị na ọdụ ha, yana Cardigans nwere ọdụ ogologo na Pembrokes nwere ọdụ dị mkpụmkpụ ma ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdụ ọ bụla ma ọlị.
Agbanyeghi na udiri abuo a nwere udi mmadu, Cardigan Welsh Corgis nwere ike buru oke ala ma nwekwaa nkweko kari ndi ibe ha a ma ama Pembroke.
Ọ bụ ezie na Cardigan Welsh Corgis na-eme nkịta ezinaụlọ dị egwu ma ha dabara adaba n'ọtụtụ gburugburu, gụnyere obibi ụlọ, nkịta ndị a chọrọ ijegharị kwa ụbọchị, ọtụtụ ọrụ na mkpali uche zuru oke.
Ikwesiri igosi Cardigan ochichi siri ike ma oburu na ichoro igbochi nkita a ibu onye mara uche na onye isi ike na imeputa otutu agwa ojoo. Kọwaa na akụkọ Cardigan gị n'okpuru.
Corgi Husky Mix, aka Horgi
Corgi Onye Ọzụzụ Atụrụ German
Australian Shepherd Corgi mix , aka ndị Auggie ma ọ bụ Corgherd
Ndi Australian Shepherd Corgi bu ezigbo nkita ezi na ulo?
chihuahua na pitbull mix ụmụ nkịta
nkịta m na -agba ọtụtụ
esi wuo igbe igbe
kedu ka nwa nkịta m agwakọtara ọnụ ga -esi buru ibu
anụ ọhịa wolf na onye ọzụzụ atụrụ German mix